Olee otú iko e mere: usoro, àgwà na Njirimara | Green Renewables
Na gburugburu anyị anyị nwere nnukwu iko n'ebe niile. Otú ọ dị, ọ bụghị ọtụtụ ndị maara kedu ka esi eme iko. N'isiokwu a, anyị ga-amụ otú e si emepụta iko na kristal na ihe ọdịiche dị n'etiti nke ọ bụla n'ime ha. Taa, anyị na-eji ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe mere nke iko na kristal. Ire ụlọ, ụgbọ ala, enyo, karama ọgwụ, karama, ihe onyonyo onyonyo, ọkụ ọkụ, ọnụ ụlọ ahịa, ihu elekere, vases, ihe ịchọ mma na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị otú e si emepụta iko na ihe ekwesịrị iburu n'uche maka ya.
1 Otu esi eme iko
2 N'ichepụta iko
3 Glass na kristal Njirimara
A na-eji ájá mee iko, ọ bụkwa ájá nwere ihe a na-akpọ silica, bụ́ ihe ndabere maka ime iko. Ọ dịkwa oke mkpa ịmara ka esi amata ọdịiche dị n'etiti iko na kristal. Ihe a na-akpọ "crystal" bụkwa iko, ma na-agbakwunyere ụzọ. Mana ka anyị leba anya n'ihe a niile nke ọma.
A na-eme iko site na silica na ájá na ihe ndị ọzọ dị ka sodium carbonate (Na2CO3) na nkume nzu (CaCO3). Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ nke mejupụtara ya Ihe 3, ngwakọta nke ájá quartz, soda na wayo. A na-agbaze ihe atọ ndị a n'ime ọkụ na oke okpomọkụ (ihe dịka 1.400ºC ruo 1.600ºC). Nsonaazụ nke ngwakọta a bụ iko tapawa nke edoberela usoro ịkpụzi dị iche iche, ya bụ usoro ịkpụzi, dị ka anyị ga-ahụ n'okpuru. Dị ka a pụrụ ịhụ, akụrụngwa maka iko bụ ájá.
Anyị ga-ahụ usoro nhazi iko 3 kachasị eji, ma ọ bụ n'otu aka ahụ, imepụta ngwaahịa iko.
Ịkpụzi ihe ọkụkụ na-akpaghị aka: Ihe iko (iko a wụrụ awụ) na-abanye n'ime oghere oghere, nke dị n'ime ya nwere ọdịdị anyị chọrọ inye iko, ma ọ bụ karịa kpọmkwem, ọdịdị nke ihe ikpeazụ. Ozugbo a na-emechi ihe a na-akpụ akpụ, a na-agbanye ikuku abịakọrọ n'ime ka ọ gbanwee ihe ahụ na mgbidi ya. Mgbe ọ dị jụụ, mepee ebu ma wepụ ihe ahụ. Dị ka ị na-ahụ, a na-emepụta enyo a wụrụ awụ na mbụ, n'ikpeazụkwa, a na-ebipụ akụkụ nke fọdụrụ, nke a na-akpọ flash. N'okpuru ibe ahụ, ị ​​nwere vidiyo, yabụ ị nwere ike ịhụ teknụzụ. A na-eji teknụzụ a eme karama, ite, iko, wdg. A na-eji teknụzụ a eme karama, ite, iko, wdg.
Emebere ya site na flotation na bat tin: A na-eji usoro a nweta efere iko, dịka ọmụmaatụ iji mee iko na windo. Wunye ihe a wụrụ awụ n'ime ite nwere mmiri mmiri. Ebe ọ bụ na iko nwere njupụta dị ala karịa tin, a na-ekesa ya n'elu tin (floats) iji mepụta flakes, nke a na-agbanye n'ime ọkụ na-ekpo ọkụ site na usoro ihe mkpuchi, bụ ebe a na-ajụ oyi. Ozugbo mma, a na-ebipụ akwụkwọ ndị ahụ.
Ndị rollers mebere: Ihe a wụrụ awụ na-agafe n'usoro mpịakọta lamination ma ọ bụ granular. A na-eji usoro a eme iko nchekwa. Ọ bụ n'ezie otu ihe ahụ dị ka usoro gara aga, ihe dị iche bụ ebe a na-egbutu ngwaọrụ dị, anyị nwere ihe mkpuchi nke nwere ike ịkpụzi na / ma ọ bụ ọkpụrụkpụ mpempe akwụkwọ tupu ịcha.
Glass na kristal Njirimara
Ihe kacha mkpa e ji mara iko bụ: transperent, translucent, waterproof, eguzogide ọnọdụ gburugburu ebe obibi na chemical reactants, na n'ikpeazụ ike ma na-emebi emebi. Ihe siri ike pụtara na ọ naghị adị mfe ịkpụcha ma na-akụriji, na-agbajikwa ya ngwa ngwa site na bumps.
Ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị n'etiti iko na kristal. Nke mbụ, anyị ga-aghọta ọdịiche dị n'etiti iko na kristal. Crystal dị n'ụdị dị iche iche na okike, dị ka quartz ma ọ bụ kristal, ya mere ọ bụ ihe eji eme ihe.
Otú ọ dị, iko bụ ihe eji eme ihe (nke ejiri aka mee) n'ihi na ọ bụ n'ihi njikọ nke ụfọdụ akụkụ (silica, soda na wayo). N'ikwu okwu kemịkalụ, nnu, shuga na ice bụkwa kristal, nakwa dị ka bara nnukwu uru, ọla na fluorescent agba.
Mana a na-ejikarị enyo aha ahụ eme ihe dị ka okwu izugbe maka ihe ọ bụla enyo enyo na-eme ka ọ mara mma karịa ite iko ma ọ bụ karama a na-eji kwa ụbọchị. Ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ "crystal" na-ezo aka na iko nke agbakwunyere lead (lead oxide). Ụdị "iko" a bụ n'ezie "iko ndu." A na-eji ụdị iko a kpọrọ ihe nke ukwuu maka ịdịte aka ya na ịchọ mma ya, ọ bụ ezie na ọ bụchaghị na ọ nwere nhazi kristal. A na-akpọ ya kristal na ọ bụ kristal a na-ahụkarị maka iko na ihe ịchọ mma.
Iji zere mmejọ, e hiwela ụkpụrụ 3 iji na-emeso iko ndu ka ọ bụrụ kristal. Ndị isi azụmaahịa na European Union chepụtara ụkpụrụ ndị a na 1969. United States ewepụtabeghị ụkpụrụ nke ya, mana ọ na-anabata ụkpụrụ European maka ebumnuche kọstọm.
Ọnọdụ atọ ndị a ga-atụle kristal na iko ndu bụ:
Ọdịnaya ndu karịrị 24%. Cheta na ọ bụ naanị iko edu.
Njupụta dị elu karịa 2,90.
Ntụgharị refractive nke 1.545.
Otú ọ dị, e nwekwara ugegbe ndị e kere eke, dị ka obsidian nke okpomọkụ na-emepụta n'ime ugwu mgbawa, dị ka iko.
Dị ka ị na-ahụ, anyị na-akpọhie ụzọ enyo ma ọ bụ enyo anya n'ihi na nghọta ya na-eṅomi iko eke. Nṅomi a na-abụkarị ebumnuche bụ isi nke ndị na-emepụta iko. Anyị ekwesịghị itinye ihe kristal ma ọ bụ ndu n'ime arịa eji emegharịgharị iko. Dị ka ihe atụ, a na-eji ugegbe mee bọlb ma ọ bụ oriọna, oriọna ndị na-egbuke egbuke, na iko mmanya. Otú ọ dị, a na-ejikarị enyo enyo eme kichin nkịtị.
Enwere ọtụtụ mgbagwoju anya na ndị mmadụ na-akpọ iko iko na ntụgharị ihu. Ozugbo anyị na-ahụ usoro nhazi nke onye ọ bụla, anyị nwere ike ịhụrịrị ọdịiche dị n'etiti ha, na mgbakwunye na njirimara ha. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu esi eme iko.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Otu esi eme iko